तिब्र गतिमा कुद्ने बिश्वका शिर्ष १० फुटबलर – Talking Sports
फुटबल आफैमा एक खेल हो जसमा बल, रणनिती र गति चाहिन्छ । गोल गर्न यी सबै कारकहरू सुनिश्चित नगरी फुटबल खेल्नु सहज कार्य भने होइन । यदि तपाईं यस खेलको प्रशंसक हुनुहुन्छ भने कति प्रसिद्ध फुटबल खेलाडीहरूको खेल तपाईंले हेर्नुभयो ? के तपाईं अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ विश्वभर सब भन्दा छिटो दौडने फुटबल खेलाडीहरू को–को होलान ? यो सामग्री मार्फत तपाईले विश्वमै सबै भन्दा तिब्र गतिमा दौडने खेलाडीहरुको बिषयमा जान्न सक्नुहुनेछ ।
१०) लियोनल मेस्सी – ३२ दशमलव ५ किलोमीटर प्रति घण्टा
यी सुपरस्टार खेलाडीमा धेरै दु्रत गतिमा कुद्ने त गर्दैनन तर पनि उनी आफ्नो कला र गतिले बिपक्षी खेलाडीलाई चकित पार्ने गर्छन् । खेल मैदानको मध्य भागबाट नै पूर्ण गति समाउन सक्छन् । फुटबल विशेषज्ञहरूका अनुसार मेस्सी ३२ दशमलव ५ किलोमिटर प्रती घन्टाको गतीमा कुद्न सक्छन । यही गतिले उनलाई विश्वका सबै भन्दा छिटो दौडने खेलाडीहरुको १० औ स्थानमा रहेका छन् ।
९) थिओ वालकट – ३२ दशमलव ७ किलोमिटर प्रति घण्टा
थिओ वालकोटले एक पटक त मैदानमै किर्तिमान कायम गरका थिए जब उनी आर्सनलको लागि खेल्दै थिए । उनले तर धेरै वर्ष लगातारको चोट पछि बिस्तारै आफ्नो प्रभाव गुमाउन पुगेका छन् । अहिले वालकोटको विश्व फुटबमा धेरै नाम लिने गरिएको त छैन तर पनि उनी ३२ दशमलव ७ किलोमिटर प्रति घण्टाको गतीमा कुद्न सक्छन् ।
८) आरोन लेनोन – ३३ दशमलव ८ किलोमिटर प्रति घण्टा टोटन्ह्यामका पुर्व खेलाडी समेत रहेका लेनोनलाई रानीङ मेसिनको उपनाम नै दिइएको थियो । विश्वका सबै भन्दा छिटो दौडने खेलाडीहरुको सुचीमो लेनोन आठौं स्थानमा रहेका छन् । उनी चार सेकेन्डमा ३६ मिटर कुद्न सक्छन् भने उनको औषत ३३ दशमलव ८ किलोमिटर प्रती घण्टा रहेको छ ।
७) पियरे–एमेरिक औबामेयाङ – ३४ दशमलव ६ किलोमिटर प्रति घण्टा
गोल्डेन बुट जित्दाका औबामेयाङको गतिलाई भेटाउन बुन्डेसलिगाका खेलाडीहरुलाई हम्मे–हम्मे नै पर्ने गर्थयो । डटर्मन्ड छोडेर आर्सनल आएका उनी अहिले पनि यही गतिमा कुद्ने गर्छन् । ३४ दशमलव ६ किलोमिटर प्रती घण्टाको गतिका साथ उनी विश्वका सबै भन्दा छिटो डौडने खेलाडीहरुको ७ औ स्थानमा रहेका छन् ।
६) एन्टोनीयो भ्यालेन्सिया – ३५ दशमलव १ किलोमिटर प्रति घण्टा म्यानचेस्टर यूनाइटेडका यी डिफेन्डर अहिले चोटका कारण मैदानमा उत्रेका छैनन् । उनी सन् २०१२–१३ सिजनको डर्बी खेलमा ३५ दशमलव १ किलो मिटर प्रती घण्टाको गतिमा दौडेका थिए । जसले उनलाई २०१५ सम्म पनि विश्वका सबै भन्दा छिटो दौडने खेलाडीको पहिलो स्थानमा राखेको थियो । तर अहिले भने उनी छैटौं स्थानमा झरेका छन् ।
५) जर्गेन डाम – ३५ दशमलव ५ किलोमिटर प्रति घण्टा
मेक्सिकन ट्रेड मिल मनिएका जर्गेन आफ्नो गति भन्दा पनि कलाका लागि धेरै प्रख्यात छन् । बिभिन्न वेबसाइटहरुका अनुसार यस मेक्सिकन खेलाडीले चाँडै नै क्रिस्टियानो रोनाल्डोको सिँहाशनमा आफ्नो नाम लेखाउने छन । जुर्गेनले पनि अरु खेलाडीले भविष्यमा आफ्नो रेकर्ड तोड्न अपेक्षा गरिएको छन ।
४) ओल्र्यान्डो बेरियो – ३५ किलोमिटर प्रति घण्टा
यो सुचिको चौथो स्थानमा रहेका बेरियो ब्राजिलियन क्लब फ्लेमिङ्गोका खेलाडी हुन् । बेरियोले आफ्नो अविश्वसनीय गतिको साथ एक विशेष छाप छोडेको छन् । उनले गत वर्ष सान लोरेन्जो बिरुद्धको खेलमा २ सेकेन्डमा १५ मिटर कुदेका थिए । यस रानीङ मेसिन को लागी सबै भन्दा बढी रेकर्ड गरिएको गती भनेको ३५ किलोमिटर प्रती घण्टा हो ।
३) ग्यारेथ बेल – ३६ दशमलव ९ किलोमिटर प्रति घण्टा
ग्यारेथ बेल सबै फुटबल प्रशंसकहरु को लागी एक परिचित नाम हो । यो आश्चर्यजनक कुरा होइन की बेल विश्वमा सबै भन्दा तिब्र गतिमा दौडने फुटबलरहरूको टप थ्रि मै परेका छन् । एल क्लासिको इतिहासमैसबैभन्दा तिब्र गतिमा दौडने क्रममा उनले २०१४ मा किङ्स कप अन्तर्गतको फाईनल खेलमा ३६ किमि प्रति घण्टाको रेकर्ड आफ्नो नाम लेखाएका थिए ।
२) आर्जेन रोबिन – ३७ किलोमिटर प्रति.घण्टा
हावाको बेगमा कुद्न सक्ने यी खेलाडीको जती प्रशंसा गरे पनि कम हुने गर्छ । २०१४ विश्वकपको समूह बी मा स्पेनिश टोली बिरूद्ध नेदरल्याण्ड्सको ५–१ को फराकिलो जितमा रोबेनको प्रभावशाली प्रदर्शन रहेको थियो । उनले रामोस र गोलकिपर क्यासिलासलाई बिट गर्ने क्रममा रेकर्ड बनएका थिए । त्यस समय उनले ३७ किलोमिटर प्रती घण्टा दौडदै किर्तिमान कायम राखेका थिए । यद्यपि यो रेकर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डोले चार बर्ष पछि तोडिदिए ।
१) क्रिष्चियानो रोनाल्डो – ३८ दशमलव ६ किलो मिटर प्रति घण्टा
रोनाल्डोले स्पेन र पोर्चुगलको खेलमा आर्जेन रोबेनको ३७ किलो मिटर प्रति घण्टाको किर्तिमान तोडेका थिए । रेकर्ड तोड्ने क्रममा उनी ३८ दशमलव ६ किलो मिटर प्रति घण्टाको बेगमा कुदेका थिए । ३३ बर्षको उमेरमा पनि विश्वका सबै भन्दा छिटो दौडन सक्ने खेलाडी हुनुमा रोनाल्डोले आफैमा गर्व गर्ने कुरा हो ।
मिलानको जितमा इब्राहिमोभिचको गोल
अर्जेन्टिनी स्टार सर्जियो अगुएरोले लामो पर्खाइपछि बार्सिलोनाको लागि डेब्यु गर्दा ब्राजिलियन फिलिपे काउटिन्होले ११ महिनामा क्लबका लागि पहिलो गोल गरेका छन् ।
आइतबार सातौं स्थानमा उक्लने क्रममा यो सिजन खराब शुरुवात गरेको बार्सिलोनाले भ्यालेन्सियालाई ३–१ ले हरायो ।
नयाँ ट्रान्सफर सिजनमा बार्सिलोना भित्रिएका अगुएरो चोटका कारण मैदान बाहिर नै रहेका थिए । काउटिन्होले गोल गर्दै टिमको जित सुनिश्चित गरेपछि अगुएरोलाई तीन मिनेटको खेल मात्र बाकी रहदा मैदानमा उतारिएको थियो ।
अन्सु फाती र मेम्फिस डिपेले गोल गर्दै बार्सिलोनालाई खेलमा अगाडी राखेपछि काउटिन्होले २०२०, नोभेम्बरमा ओसासुनाबिरुद्धको ४–० को जितपछि पहिलो गोल गरेका थिए ।
खेलमा अग्रता भने भ्यालेन्सियाले लिएको थियो । पाचौं मिनेटमै होजे गायाले पाहुना टोलीलाई सरप्राइज लिड दिएका थिए । चोटका कारण झण्डै एक बर्ष बाहिरिएका फातीले बक्स बाहिरबाट सुन्दर गोल गर्दै बराबरी गरेका थिए ।
फातीले नै बक्समा फउल ड्र गर्दै प्राप्त पेनाल्टीमा डिपेले गोल गरेका थिए । बार्सिलोना ८ खेलपछि १५ अंकका साथ सातौं स्थानमा रहेको छ । शिर्ष स्थानको रियल सोसिडाडको ९ खेलबाट २० अंक छ ।
रियल म्याड्रिड, सेभिया, एट्लेटिको म्याड्रिड र ओसासुनाको समान १७ अंक छ । ओसासुनाले आइतबार नै भिलारियाललाई २–१ ले हरायो भने सेभियाले सेल्टा भिगोलाई १–० ले पराजित गर्यो ।
साफ च्याम्पियनसिप फाइनलः नेपाल दुई गोलले पछाडी